मेमोरी चिप्सको माधयमबाट मानव मस्तिष्कलाई ब्याकअप गर्न सकिने ! - Jay Loktantra
Home बिश्वमन्च मेमोरी चिप्सको माधयमबाट मानव मस्तिष्कलाई ब्याकअप गर्न सकिने !
मेमोरी चिप्सको माधयमबाट मानव मस्तिष्कलाई ब्याकअप गर्न सकिने !
२०७७ भाद्र १८, बिहीबार १२:५८
काठमाण्डौ । तपाइँले आफ्नो मेमोरीलाई ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइँको दिमाग एउटा चिपबाट नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। कयौँ रोगहरु निको हुन सक्छन् । एउटा चिपले तपाइँको दिमागलाई अपरेट गर्न सक्छ ।
यी सबै कुरा सुन्नमा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ । यो कुनै साइन्स फिक्सन फिल्मको दृश्य होइन । यो त विश्वकै तेस्रा धनी व्यक्ति एलन मस्कले भविष्यमा वास्तविकतामा परिणत गर्न लागेको प्रयास हो ।
एलन मस्क अमेरिकी धनाढ्य व्यावसायी हुन् । जसले विद्युतीय कारलाई वास्तविकतामा परिणत गरेका थिए । यसका साथै उनी अहिले मंगल ग्रहमा मावन बस्ती बसाउने अभियानमा लागेका छन् ।
एलन मस्कको कम्पनी न्युरालिंक पछिल्ला कयौँ वर्षदेखि मानव दिमाग पढ्न सक्ने चिपमाथि काम गरिरहेको छ । अहिले कम्पनीले सुँगुरको दिमागमा यो चिपलाई राखेर काम गरेको छ ।
न्युरालिंकले सिक्काको आकारको चिपको प्रदर्शन सुँगुरको दिमागमा राखेर गरेको छ । यो यस्तो चिप हो जुन पछि मानव मष्तिस्कमा पनि फिट गर्न सकिनेछ । स्कल सर्जरीका माध्यमबाट यसलाई मानव दिमागमा फिट गर्न सकिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
यो चिपको लन्च इभेन्टमा एलन मस्कले विश्वलाई तीनवटा यस्ता सुँगुर देखाएका थिए । जसमध्ये एउटाको दिमागमा चिप थियो, दोस्रोको दिमागमा चिप लागाएर निकालिएको थियो र तेस्रोको दिमागलाई त्यतिकै छोडिएको थियो । न्युरालिंकको टिमलाई आधार मान्ने हो भने सुँगुरमाथि गरिएको यो परीक्षण सफल भएको छ ।
गरटुर्ड नामको सुँगुरको दिमागमा लगाइएको चिपका माध्यमबाट उसको दिमागमा चलिरहेको सोचविचार वायरलेस सिग्नलमार्फत कम्प्युटरमा देख्न सकिन्थ्यो ।
कम्पनीका अनुसार उनीहरुको चिपमा ३ हजार इलेक्ट्रोइड्स लगाइएका छ । जसले मावन दिमागको १ हजार न्युरोनलाई पढ्न सक्छन् । न्युरोन अर्थात् दिमागका कोशिकाहरु। जसले शरीरको बाँकी कोशिकालाई मुभमेन्ट स्पिच र बाँकी क्रियाकलापका लागि संकेत दिने गर्दछन् । यो चिपले सिग्नल रेकर्ड गर्ने गर्दछ। त्योे ईसीसी ग्राफजस्तै देखिने गर्दछ ।
एलन मस्कका अनुसार उनको यो पाथब्रकिङ चिपले मानव दिमागको सिग्नल पढ्न सक्नेछ। जसका कारण मेमोरीको ब्याकअप सम्भव हुन सक्नेछ । यसको अर्थ दिमागसँग जोडिएका रोगहरु जस्तै– स्पाइनल कर्ड र मुभमेन्टसँग जोडिएका रोगहरु यो चिपका माध्यमबाट निको हुन सक्छ । किनकि दिमागलाई यो चिपका माध्यमबाट नियन्त्रण गरिनेछ ।
मस्कले यो चिपले नोक्सानी पनि गर्न सक्ने स्वीकारेका छन्। किनकि चिपका माध्यमबाट दिमाग नियन्त्रण गरेर जुनसुकै काम पनि गराउन सकिन्छ । – एजेन्सी
Previous articleनब्बे टेके वारेन बफेट, भन्छन् (‘लगानीभन्दा प्रतिफल महत्वपूर्ण’
Next articleआर्थिक परिसूचक बिगारे ः माफिया र तस्करको संरक्षण गर्दै देशलाई १४ खर्व १९ अर्व ऋणमा डुबाएर हिडे खतिवडा